Umntwana waphenduka unyaka, manje sekuyisikhathi sokuyeka ubisi lwebele bese umfundisa ukudla okunzima. Ngalesi sikhathi ingane isivele inezinyosi eziningana, isiyazi kakade ukuthi ingaluma kanjani futhi ifune kancane. Kudingeka sithuthukise kancane kancane lamakhono.
Ukudla okuyisisekelo emva konyaka kuseyi-porridge kanye namazambane ahlambulukile, kodwa kancane kancane unganikeza ukudla okudingayo ukuhlafuna. Kungaba ama-saladi, isobho esingaphenduliwe, izingcezu zemifino nezithelo, ukuqala ngaphandle kwesikhumba. Kumele kukhunjulwe ukuthi uhlelo lokugaya ingane alukakhiwa ngokuphelele, ngakho-ke izitsha ezithosiwe ziyingozi kumntwana, kungcono uma unikela kuye izitsha ezitshisiwe noma ezithambile.
Kusukela uneminyaka eyodwa ubudala ubudala, izingane ziqala ukuzijwayeza ukusebenzisa izinsika ngokwazo.
Kubalulekile ukujwayele ingane ukudla okuhlukahlukene. Ukudla okungafani nakakhulu kuzoba ekudleni kwengane, ukudla okunomsoco kuyakuba njalo.
Ingane eneminyaka elilodwa inganikezwa ukudla okulungiselelwe kusuka ekudleni inyama: ama-cutlets, ama-meatballs. Izitshalo nemifino ayisekho isidingo sokusula. Ungenza ama-casseroles, ama-saladi, unike izingcezu zokubiliswa nemifino eluhlaza.
Ukudla komntwana emva konyaka kufanele kube nemikhiqizo eminingi yobisi. Ubisi kutholakala kalula nge-calcium, amaprotheni, amafutha namavithamini. Imikhiqizo yobisi nemifino enomuncu ingane kufanele ithole cishe ngo-600 ml ngosuku, futhi ubukhulu bonke ukudla okudliwe ngosuku bulingana nekhilogram.
Amaprotheni aphelele, kanye ne-phosphorus, atholakala enyama nasezinhlanzi. Kanye nenyama yezinhlobo ezithile zezinhlanzi (isibonelo, i-cod), ingane ingathola amafutha enhlanzi, okuyinto uma isetshenziswe kuleli fomu ayibangele izingane ukuba zishaye indiva. Amalungiselelo amaningi ekhemisi ayilungiswa kunhlanzi, kodwa avela emanzini amaningi. Ukudla kuncono ukunikeza amafutha aphansi, enkomo noma enkukhu. Inyama nezinhlanzi kufanele zinikezwe izikhathi ezingu-4-5 phakathi nesonto.
I-yolk ye-egg inganikezwa ngobuncane kubantwana abangaphansi konyaka owodwa ubudala. Iprotheyini iqala ukunikezwa okuningi kamuva, cishe iminyaka eyodwa nesigamu. Iqanda liqukethe i-polyunsaturated fatty acids, amavithamini ne-lecithin. Kubalulekile ukunikeza amaqanda kuphela noma amaqanda, njengoba amaqanda amanzi ngokuvamile anegciwane lesandulela ngculazi. Amaqanda ubilise kanzima, ngoba amaqanda aluhlaza kunzima kakhulu ukugaya.
Imifino nezithelo - umthombo wama-vithamini kanye nosawoti wamaminerali kuphela, kodwa futhi i-fibre, edingekayo ukuze kusetshenziswe ngendlela efanele emaphethelweni emathunjini. Ingane inganikezwa kuphela imifino eluhlaza kanye nobilisiwe, kodwa futhi iqhwa, ekheniwe, emisiwe. Emasaladi nasobho, ungangeza imifino. Uma kungekho ukusabela okwe-allergenic, ayikho imingcele ekusetshenzisweni kwemifino. Ngaphandle kwalokho, ungafaki utamatisi, futhi unike izaqathe namathanga ngokuqapha. Ngaphambi kokupheka imifino yenziwe amahora amaningana, namazambane ngosuku.
Ukuze kusetshenziswe kahle isisu, kubalulekile ukuthi ukudla kube nokulinganisela ngokwemali yezinyosi kanye noketshezi. I-soups kufanele inikezwe izingane njengezifundo zokuqala, ngoba uma upheka, izinto ezidingekayo zokugaya ezinye izitsha zingene emhluzweni. Udinga ukunikeza isobho esincane inyama, inhlanzi, umhluzi wemifino.
Isobho se-soup, esilungiselelwe ukudla komntwana emva konyaka, silungiswe ngandlela-thile: inyama ifakwa emanzini abandayo futhi iphekwe ekushiseni okuphansi kuze kuphekwe, khona-ke umhluzi uhlungwa futhi inyama iphinde ibekwe kuyo. Khona-ke isobho siphulwa ngokusho iresiphi.
Ukwenza ukudla komntwana kuhambisane, cabanga ngemenyu yayo. Uma upheka isobho semifino, khona-ke okwesibini ukhonza isitsha sezitshalo. Uma isobho siphuzwa nge-cereal, okwesibili, sinike imifino.
Kule minyaka yobudala, izingane zidla kancane kakhulu: isobho elivamile lokukhonza lingu-120-150 ml. Ungamondli ingane ngokucindezela, ukudla ngokweqile kule minyaka kuyingozi kakhulu futhi kuholela ekukhulupheni nokuphazanyiswa kwezinqubo ze-metabolic, okuyinto enzima kakhulu ukulwa nayo.
Izitshalo ezinhle kakhulu zokudla komntwana ziyi-buckwheat ne-oatmeal, zinamaprotheni amaningi namaminerali okudingwa ngumntwana. Ilayisi kufanele inikezwe ngokucophelela, njengoba kuphazamisa kwezinye izimo ukuqotshwa. Esigodini ungafaka amajikijolo nezithelo, ngakho-ke ingane izovuma ukuyidla.
Isinkwa singanikwa ingane nsuku zonke, kodwa hhayi ngaphezu kuka-150 g wezinkwa ezimhlophe emva konyaka no-50 g omnyama emva konyaka nengxenye. Esikhathini esibandayo, unike ingane isinkwa nangoketshezi ngaphezu kwehlobo.
Ungathathi ishukela, isilinganiso esamukelekayo nsuku zonke somntwana kusukela eminyakeni eyi-1 kuya kwemi-3 singama-40-50 amagremu. Inani eliningi kakhulu likashukela lidala ukuphazamiseka kwamagciwane, ukukhuluphala, ukugcwala umzimba kanye nesifo sikashukela. Ushukela ungathathwa indawo ngempumelelo uju. Yidisa ukudla kwakho kangcono nge-ushukela wemvelo anezithelo.
Imikhiqizo emisha kufanele inganikezwa ingane kaningi kangako kanye njalo ezinsukwini ezintathu. Lokhu kuzovumela ukulandelela ukuthi kungenzeka kanjani ukubhekana nokugula.
Ukondla ingane usana
Sijwayele ingane ukuba izitsha ezintsha
I-porridge ewusizo yezingane ezincane
Ungasho kanjani cha futhi uzizwe unecala?
Isaladi nge-inkukhu kanye ne-yoghurt yokugqoka
Lapho umuntu ekhuluma ngokuthandana, kancani ukuthi uyathandana
Swayipha imishini, imilenze nezandla
Indlela yokukhulisa ingane enempilo nehlakaniphile?
Ukudla kunconywa nge-cholecystitis
Ama-pancake amahle anama-Classic futhi ayengempela, izindlela zokupheka ezinhle kakhulu ngesithombe
I-Herring ngaphansi kwengubo yoboya
UFyodor Bondarchuk wahlangana nomndeni kaPaulina Andreeva, isithombe